News 18 Nepal || ‘आफु सक्षम र स्वाभलम्बि बन्न सकेँ महादेव जस्तो श्रीमान छानि छानि पाइन्छ’
राधा पोखरेल । संविधानमा जे लेखिए पनि धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने भेदभावलाई समाजले स्वीकृति दिँदै आएको छ । यौन हिंसा पुराणकालदेखी आजसम्म एक शताब्दी लामो संघर्षपछि पनि लैंगिक लगायत विभिन्न भेदभाव फरक-फरक रूप र प्रकृतिमा संसारभर कायम छ । नेपालको संविधानले शब्दमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने विभेद जारी नै देखिन्छ । नेपालको कुन संस्कृति र धर्मले महिलालाई सहानुभूति दिएको छ होला र ?
अहिले विश्वभर ” शक्तिको विमर्ष ” चलिरहँदा हामी भने पानी नै नपिइ माहादेव जस्तो लोग्ने पाउने आशका लागि समर्पित छौं ! पितृ सत्ताको जरो हामिमा यसरी गाडिएको छ कि हामी आफैं खुट्टामा बाँधिएको सालो छुट्टाउन किन खोजिरहेका छैनौं ? किन हामि परम्परालाई धानिरहेका छौं बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेझैं ? भन्नलाई त भन्छौं हाँमि नै – “नारी आधा आकाश तर आधा हिस्सामा किन अधिकार जमाउन सकेका छैनौं ?
समाजमा संस्कार रातारात निर्माण हुँदैन । संस्कार निर्माणका लागि सयौं, हजारौं वर्ष समाजले खर्च गरेको हुन्छ । अग्रगामी संस्कारले समाजलाई ऊर्जा दिन्छ, अग्रगमनतिर लैजान्छ । पश्चगामी संस्कारले समाजलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्छ । धार्मिक पुस्तकहरु पनि पुरुषहरुद्धारा रचिएका हुनाले त्यहाँ नारीलाई महत्व दिनुभन्दा दबाउने तिर नै बढी सचेतता देखिन्छ ।
पाश्चात्य साहित्यमा पनि अरिसिटोटलले दुखान्त नाटकका चरित्रका विषयमा चर्चा गर्दा नारीलाई दासभन्दा केही माथि राखेका छन् ! संस्कृतिको नाममा यस्ता विकृतिलाई मान्नुहुन्न । यसलाई भत्काउनै पर्छ । तर भत्काउनुको अर्थ ध्वंस गर्नु मात्रै होइन, मुख्य कुरा निर्माण गर्नु हो । बदलाभावले प्रेरित भएर गरिएको ध्वंसले निर्माण गर्न सकिँदैन । के हामी नारी पितृसत्ताको बदलामा मातृसत्ता स्थापित गर्न चाहान्छौं ? पक्कै चाहादैनौं ।
परम्पराको नाममा सती प्रथाको माध्यमबाट लाखौं, करोडौं निर्दोष महिलाहरूको क्रूरतापूर्वक ज्यान लिने देश हो- भारत र नेपाल । मृतक पतिको चितामा पत्नीलाई जबर्जस्ती जिउँदै जलाउन गर्व गर्ने, धर्म देख्ने पुरुषप्रधान समाज हो, नेपाल र भारत ।
धर्म र परम्पराको नाममा निर्दोष नारीलाई पतिको चितामा जबर्जस्ती जिउँदै डढाएर पुण्य कमाउने समाज हो हाम्रो । बि. सं. १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत सती प्रथा रोक्नखोज्ने जङ्गबहादुर राणाको चितामा ४२ रानीहरूलाई जबर्जस्ती जिउँदै डढाउने देश हो नेपाल । चन्द्रशमशेरले बि. सं. १९७७ मा यस प्रथामाथि बन्देज नलगाएको भए अरु कति थप निर्दोष नारीहरूको जीवन पतिको चितासँगै खरानी हुन्थ्योहोला । सम्झदा मात्र पनि रिंगटा लाग्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै शिर्ष नेताले कस्तो दिए प्रतिक्रिया ?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा विघटन सदर भए के होला ?
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ६८ जिल्लामा टुङ्ग्यायो नेतृत्व, कुन जिल्लामा को ?